Filtrer les éléments par date : mardi, 15 août 2017
mardi, 15 août 2017 21:25
Mahabo-Menabe: Mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriampahalemana
Velon-taraina ny mponina aty an-toerana, mbola misy miaro azy ireo sy ny fananany ihany ve sa dia hojerem-potsiny ny asan-dahalo aty ?
mardi, 15 août 2017 21:07
Mahazoarivo: Cambriolage raté
Un magasin de boissons alcooliques et de parfums sis à Mahazoarivo, dans le IIème Arrondissement de la Capitale a été la cible des cambrioleurs armés le lundi 14 août. Ils étaient trois, dont deux sont entrés dans le magasin tandis que le troisième était resté dehors.
Une fois à l’intérieur, l’un des cambrioleurs a dégainé son arme en réclamant l’argent de la caisse tandis que l’autre a tenté de ramasser tout ce qu’il pouvait porter. Le vendeur, avec son sang froid, a riposté avec son pistolet lui aussi. Sentant leur vie en danger, les cambrioleurs ont pris leurs jambes à leur cou pour s'enfuir sans rien porter.
mardi, 15 août 2017 20:58
Toamasina: Komanda sambo saika hamono tena fa tsy maty
Notsatohany antsy teo amin'ny tratrany, izay nitarika tamin’ny coma profond vokatry ny fahaverezan-dra be loatra. Tao anatin’ny sambo nentiny, niantsona tao amin'ny seranan-tsambo no nitranga ity toe-draharaha ity androany talata 15 aogositra maraina.
Raha ny fanazavana re tamin’ireo mahalala ity komandan’ny sambo ALTHEA ity dia betsaka loatra ny olana nianjady taminy teo ampiaingana tany Azia ka hatreto Toamasina izay nanatitra vary milanja 11.000 taonina.
Vao niainga izy ireo dia nisaringotra tamin’ny tadin'ilay sambo ihany ny “hélices” ka nitarika fahasimbana hatramin'ny motera. Tongany teto Toamasina ihany anefa ny sambo saingy vao nihantsona tamin'ny Quai dia nidona mafy ilay sambo ka nisy fahasimbana noho ilay “hélices” nisy olana ; simba vokatr’izany ihany koa ny fitaovan'ny orinasa mpamokatra simenitra Holcim, mipetraka eo amin'ny Mole C1.
mardi, 15 août 2017 20:54
Tantsambo malagasy: Goavana ny elanelana mitaha amin’ny any ivelany
Ny tantsambo malagasy aty Madagasikara dia eo ambany fiadidian'ny APMF (Agence portuaire maritime et fluviale). Betsaka ny zavatra takian'ny APMF amin'ny tantsambo malagasy vao afaka miondrana izy, toy ny “visite médicale”, “sécurité de base”. Ireo farafahakeliny ny taratasy ilaina aminy.
Atao isaky ny 2 taona ny “visite médicale” ho an'ny tantsambo 18 hatramin'ny 50 taona, ary isan-taona ho an'ny mihoatra ny 50 taona.
Efa misy mpitsabo notsongain'ny APMF hanao ny “visite médicale” ka ny sarany dia 200.000 hatramin'ny 250.000 Ariary arakaraka ny toerana anaovana azy. Ny “Sécurité de base” kosa dia 460.000 Ariary ny saran'ny fianarana voalohany ary 320.000 Ariary ny fanamafisana na “revalidation”, ka ao amin'ny sekolim-pirenena fanofanana tantsambo na ENEM Mahajanga no anaovana azy.
mardi, 15 août 2017 20:03
RN7: Nampisavorovoro ny fomba fiasan’ny Zandary
Niteraka fifamaliana teo amin’ny mpandeha sy ny Zandary ny fiandrasana ela loatra tamin’ny lalam-pirenena faha-7 omaly, nefa mbola lavitra ny dia.
Voatazona nanomboka tamin’ny 9ora alina hatramin'ny 1 ora maraina teo Ivato-Ambositra ny taxi-brousse niala omaly alatsinainy 14 aogositra noho ny fandaminan’ny Zandarimariam-pirenena.
Zandary iray no nitondra ny “carte-grise” ny fiara rehetra niainga teo amin’ny Fasankarana-Antananarivo.
Nisy tsy nahandry anefa ny taxi-brousse sasany fa nanohy ny dia ihany hatreto Ambohimahasoa satria mizara ny lalana manomboka eo. Ny ampahany voalohany mankany Atsimo Atsinanana, ny ampahany faharoa kosa miazo an’i Fianarantsoa sy Toliara.
mardi, 15 août 2017 19:48
Toamasina: Mivarotra rano maloto ny Jirama ?
Mitsipaka marindrano ny fanankianan’ny mpanjifa milaza fa rano maloto ary indraindray aza misy kankana no zarain’ny Jirama, ny talem-paritanin’ny Jirama Toamasina, Veloson Léonard.
Miaiky anefa izy fa efa antitra, satria efa tamin’ny taona 1929 izany hoe 88 taona izao ny fotodrafitrasa fitarihan-drano miainga ao amin’ny reniranon’i Ranomainty sotroina eto Toamasina, na izany aza dia mandalo sivana sy fanadiovana maromaro ary mbola mandalo fitilian’ny Institut Pasteur ny rano vao tonga eny amin’ny mpanjifa.
Noho io fahanteran’ny fantsona io anefa no mahamena ny lokon’ny rano sy mampisy kankana tsikaritry ny mpanjifa indraindray.
Mamokatra rano 740.000 m3 isam-bolana ny Jirama Toamasina, ka ny 510.000 m3 amin’io ihany no tonga eny amin’ny mpanjifa.
mardi, 15 août 2017 19:47
Morondava-Menabe: Delestazy lavareny
Toa efa zary tsy mahataitra ny mponina eto an-drenivohitry ny Faritra Menabe intsony ny fahatapahan-jiro lava an’ny Jirama na dia mimenomenona ihany aza, fa ireo mpiala sasatra no kivy sy diso fanantenana satria, mba te hitsangatsangana amin’ny harivariva nefa matahotra ny asan-jiolahy hany ka miaritra.
Fianarantsoa: Nanao veloma farany an’i Andry Ratovo ny mpanao gazety
Tonga nanotrona ny fianakavian'i Andry Ratovo ny marain'ity talata 15 aogositra ity ny solontenan'ny mpanao gazety sy ny haino aman-jery eto Fianarantsoa. Izany dia nahitana ny mpanolontsain'ny Holafitry ny Mpanao gazety na OJM eto an-toerana, ny filohan'ny fikambanana AJCF, ny tomponandraikitry ny serasera eo anivon'ny Faritra, ny tonian-dahatsoratra avy amin'ny televiziona rahavavy ary ny mpanao gazetin'ny Sobika aty Fianarantsoa.
mardi, 15 août 2017 15:52
Soamanandrariny: Tratra ireo mpanafika 12 lahy
12 Lahy indray no voasambotra noho ny fanafihana teny Soamanandrariny.
Tambazotra iray no hita fa nanafika teny an-toerana koa tratra teny ireo kojakojan-tokatrano ary anisan’ny nandray anjara tamin’izany I KAISARA izay rain-dahiny amin’ireo Jiolahy.
mardi, 15 août 2017 15:21
Fianarantsoa: Kaondoham-panjakana momba ny Dinan'i Matsiatra Ambony
Tonga nanatrika izany ny ministra miisa 5 izay tarihin'i Rakotovao Rivo. Tarigetra ny fanatsarana ny Dina mifehy ny vaki-paritra isanisany eto an-toerana. Notanterahina omaly alatsinainy 14 aogositra izany.
Hatreto dia mpikambana ao amin'ny komitin'ny Dina mitontaly 5 no lavon'ny mahavanon-dratsy. Miandalana ny fampitana ny vokatr'izao atrikasa izao.